သူတို့ငါတို့ရှိသမျှသည်ဒုက္ခသည်များနှင့်ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူနှင့်အတူမက်ဆေ့ခ်ျကိုကွိုဆို #ThisIsYourHomeToo မျှဝေချင်မှလှိုဖြစ်ကြောင်းဒုက္ခသည်များနှင့်ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူကိုပြောပြမယ့်ရှပ်အင်္ကျီကိုဝယ်. သင်လည်းနိုင်, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြိုဆိုကင်ပိန်းကနေရှပ်အင်္ကျီဝယ်ယူခြင်းဖြင့်. ရှပ်အင်္ကျီနှင့်တင့်ကားကုန်ကျစရိတ် $24. ကလေးများရှပ်အင်္ကျီကိုလည်းများအတွက်ရရှိနိုင်ပါ $15. ကမ္ဘာ့ဖလားဒုက္ခသည်များနေ့ဇွန်လ 20 Send ဖြစ်ပါသည် ... ဆက်ဖတ်ရန်